नाटक अभिनय के हो ? मैले बुवाबाट थाहा पाएः कलाकार प्रकाश घिमिरे - Mardi News Mardi News
नाटक अभिनय के हो ? मैले बुवाबाट थाहा पाएः कलाकार प्रकाश घिमिरे
प्रकाश घिमिरे पोखरेली सेरोफेरोमा उनलाई नचिन्ने सायद कमै होलान । पेशाले शिक्षक, उमेरले ६० को नेटो काटदै छ । ३७ वर्ष जति कन्या माध्यामिक विद्यालय नदिपुर पोखरामा सेवा गरि शिक्षण पेशाबाट २०७५ मंसिरमा अवकाश लिए । हाल उनी अभिनय क्षेत्रमा व्यस्त छन् ।
पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका पूर्व अध्यक्ष्य र सल्लाहकारको भूमिका निभाउदै आएका कलाकार घिमिरे पोखरा प्रतिविम्ब नाटय समूहमा आबद्ध छन् । लगभग ३७ वटा नाटकमा जीवन्त अभिनय गरिसकेका उनले गीत तथा संगीतकार स्व. सुक गुरुङको निर्देशनमा ईज्जत जब सकिन्छ नाटकमा अभिनय गर्दाको समय अझै सम्झिन्छन उनी ।
निर्देशक अनुप बरालद्वारा निर्देशित र साहित्य तथा नाटककार सरुभक्तद्वारा लिखित हिमाली जाती प्रथामा आधारित थाङ्गला नाटकमा प्रमुख भूमिका निभाएको छ, जुन बहुपति प्रथामा आधारित नाटक हो ।
प्रकाश घिमिरेको नाटक प्रतिको शुरुवाति यस्तो रहेछ । उनका बुवा तेजनाथ घिमिरे कवि तथा साहित्यकार भएकोले एक दिन पोखरा फुलबारी ब्यारेकबाट जीपमा आर्मीहरु आएर प्रकाशलाई तेजनाथ घिमिरेको घर यै हो भनेर सोधेछ । उनी सानै केटो भएकोले त्यसबेला डरले थरथर कामेछ । त्यसमा पनि पञ्चायती व्यवस्था, वुवा काँग्रेस भएकोले आर्मीले गोलि हानेर मार्छ कि भन्ने डर भएछ उनलाई । पछि थाहा भो बुवालाई ब्यारेकबाट भृकुटी नामक नाटक लेख्न अनुरोध भएको रहेछ । पछि बुवाबाट नै नाटक अभिनयसम्बन्धी धरै कुराहरु थाहा भयो र नाटक प्रति प्रकाशको रुचि मोह बढदै गयो ।
उनले २०६१÷६२ सालतिर निर्देशक नबिन सुब्बाद्वारा निर्देशित नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित नेपाली धारावाहीक टेलिसिरियल ‘दलन’मा अभिनय पनि गरे । यो उनको चलचित्र क्षेत्रमा पहिलो डेब्यू थियो । विस्तारै उनी अभिनय यात्रा सिने क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्दै गयो । उनीद्वारा अभिनित नेपाली चलचित्रहरु ‘टलक जंग भर्सेस टुल्के, छ माया छपक्कै, साईंली, फनको, जात्रा, जात्रै जात्रा, पशुपति प्रसाद, पञ्चे बाजा, घाम पानी र पानीफोटो’ आदि छन । उनको ‘टलक जंग भर्सेज टुल्केमा’ गाउँको मुखिया र सामन्तिको भूमिका दमदार छ । त्यस्तै ‘पशुपति प्रसाद’ पनि हेर्न लायकको छ । सपरिवार बसेर हेर्न सुहाउने खालको छ ।
कलाकार घिमिरेलाई चलत्रिमा भन्दा नाटकमा काम गर्दा फरक आनन्द आउने बताउँछन् । उनलाई चलचित्र क्षेत्रभन्दा नाटकमा अभिनय गर्दा आत्म सन्तुष्टि बढी प्राप्ति हुने बताउँछन् । किनकी नाटकमा दर्शकको वाही र फिडब्याक तुरुन्त पाईन्छ । तर चलचित्र क्षेत्रमा फिडब्याक पाउन भने समय लाग्छ ।
घिमिरे पर्यटकीय क्षेत्र बन्दिपुरमा भरखरै छायांकन हुदै गरेको खगेन्द्र लामिछानेको निर्देशनमा ‘गणपति’ चलचित्र सुटिङ्गमा यतिखेर व्यस्त छन ।